Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya oo sheegtay in boqolaal Soomaali ah la laayay - BBC News Somali
Wasiirka isboortiga iyo dhalinyarada ahna la taliyaha arrimaha saxaafada ee madaxweynaha Maxamed Bille 'Miig', oo u hadlay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dad Soomaali ah oo aad u badan lagu laayay deegaanada xuduudaha ee ay wadaagaan maamulada Soomaalida iyo Oromada Itoobiya, wuxuuna falkaas ku eedeeyey ciidamada maamulka Oromiya.
"Dhimasho aad u farobadan ayaa jirta, boqolaal ayay gaarayaan dadka dhintay, hanti badana waa ay ku burburtay, maadaamaa waxa shaqadan fulinaya uu ciidan yahay, dad badan ayaa ku naf waayay" ayuu yiri wasiir Maxamed Bille.
Mar uu ka hadlay cidda dilka gaysatay ayuu sheegay "Waxaa markasta weerarada soo qaadaya waa ciidamada booliiska Oromiya, meelaha aan xuduudaha ka leenahay shacabka degan ayay kusoo qaadaan, iyada oo dadka shacabka ee Soomaalida ah ee halkaas degen ay yihiin dad nabadgelyada jecel, waxayna soo weeraraan iyaga oo qaabaysan oo nidaam dowlad ku socda, dad badan ayaana ku naf waayay, dad kalana waa la barokiciyay".
Dhanka maamulka Oromiya ma jiro cid ka hadashay eedeymaha loo jeediyay iyo waliba waxa dhacay toona.
Wariyaha BBC-da ee magaalada Hargaysa Axmed Siciid Cige ayaa soo sheegaya in xalay labo qof oo Oromo ah lagu dilay bar koontarool oo ku taala wadad u dhaxaysa Hargaysa iyo Arabsiyo kadib markii uu nin askari ah rasaas ku furay.
Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sheegay in askarii la xiray, lana baarayo sababta dilka keentay, wuxuuna intaas ku daray in ciidamada heegan la galiyay , lana faray in aanan wax la yeeleynin dadka Oromada ah ee ku sugan Somaliland.
Dilkan ayaa loo malaynayaa in uu la xiriiro dhacdada Itoobiya ee Soomaalida lagu laayay, waxaana jirta xiisad sii kordhaysa oo arrintaas ay abuurtay.
Dadkii Harar lagu laayay ayaa lagu aasayaa magaalada Jig Jiga sida ay noo xaqiijiyeen illo madax banaan, iyada oo sidoo kale dadka Oromada ah ayaa laga daadgureeyay deegaanka Soomaalida Itoobiya baqdin laga qabo in waxyeelo kasoo gaarto shacab caraysan, sida uu noo xaqiijiyay wasiirka.
Makhaayadda 'Shaaha Ninka' ee Jigjiga
Haweenk Soomaalida Itoobiya oo siyaasada door wayn ka ciyaara